Muxuu Pep Guardiola ka yiri guushii ay ka gaareen kooxda Arsenal? – Gool FM
(London) 22 Feb 2021. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa carabka ku adkeeyay sida uu u adkaa kulankii ay guusha kaga gaareen naadiga Arsenal horyaalka Premier League.
Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa guul ay u dagaallantay ka soo qaadatay Arsenal oo ay ku booqatay garoonkeeda Emirates, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-1, ciyaar qeyb ka ahayd kulamada toddobadkan ee horyaalka Premier League.
Haddaba ciyaarta kaddib macalinka reer Spain ee Pep Guardiola ayaa u sheegay warbaahinta:
“Waxay ahayd ciyaar aad u adag, mid ka mid ah kuwa ugu adag marka loo eego sida ay u ciyaaraan, tayada iyo fikradaha ay leeyihiin, taasi waa mid aad u adag, laakiin waan ku guuleysanay howsha.”
“15-kii daqiiqo ee ugu horeeyay waxaan aheyn kuwa aad u fiican, intaas kaddib iyagana aad ayey uga fiicnaadeen, waan ku dhibtoonay dhamaadka qeybtii hore.”
“Intii u dhaxeysay labada qeyb, waxaan bedel ku sameynay dhanka cadaadiska, qaabkii aan u ciyaarnayna aad ayaan u xakameeynay.”
Si kastaba ha noqotee, Manchester City ayaa sii dheereysatay hoggaaminta miiska kala sareynta horyaalka kaddib guushan ay ka gaartay Arsenal, iyadoo leh 59 dhibcood, waxayna 10 dhibcood nadiif ah ka sareysaa kooxda ku soo xigta ee Manchester United.